बिश्वकप फुटबल: ब्राजिलले कोस्टारिकाको सामना गर्दा यस्तो चुनौती ! || सुनौलो नेपाल
बिश्वकप फुटबल: ब्राजिलले कोस्टारिकाको सामना गर्दा यस्तो चुनौती !
ब्राजिलले समूह ‘ई’ को दोस्रो खेलमा आज कोस्टारिकाको सामना गर्दै छ। विश्वचर्चित स्टारले भरीएको पाँच पटकको विश्व च्याम्पियन ब्राजिललाई कोस्टारिकासँग आफ्नो स्टाटस जोगाउने चुनौती रहेको छ। तर, ब्राजिल पहिलो खेलमा स्विटजरल्यान्डसँग बराबरीमा रोकिएपछि कोस्टारिकाविरुद्ध ब्राजिल स्वभाविक दबाबमा हुने छ। कोस्टारिका र ब्राजिल दुबैका लागि नकआउट चरणमा स्थान कायम राख्न पनि दुबेलाई जित अत्यावश्यक छ।
सर्वियासँग कोस्टारिका १–० ले पराजित भएको तथा ब्राजिलले पनि स्विटजरल्यान्डसँग अंक बाँडेकाले टिमलाई उदघाटन खेलमा भन्दा दोस्रो खेलमा बढी दबाबमा हुनेछ। ब्राजिल कोस्टारिका विरुद्ध मैदानमा उत्रंदा उसलाई अघिल्लो खेलको नतिजाले पिरोल्ने नै छ। साथमा खेलाडीको चिन्ता पनि थपिएको छ। उसका स्टार स्ट्राइकर नेयमार फिट भएको भनिएपनि उनले खेल्ने या नखेल्ने अन्योल्ता कायम रहँदा पाउलिन्हो र थियोगो सिल्भाले कोस्टारीका विरुद्धको खेल गुमाउँदै छन्। तर ब्राजिललाई अर्जेन्टिनी स्टार कोउटिन्होको खेलमा विश्वास रहेको छ।
साथमा उनलाई फर्नान्डीन्हो रेनाटो अगुइएस्टो, गाव्रिएल जेसस लगाएतले साथले ब्राजिलले जित आत्मासाथ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विश्वकपको पहिलो खेलसम्मलाई आधार मान्ने हो भने ब्राजिल पछिल्ला १२ खेलमा अपराजित रहेको छ भने उसको पोस्टमा विपक्षीले तीन गोल मात्र गरेका छन् । त्यसैले ब्राजिल स्वभाविक रुपमा बलियो मानिएको छ। कोस्टारिकाविरुद्ध पनि ब्राजिलको इतिहास बलियो रहको छ। ब्राजिलले कोस्टारिका विरुद्ध खेलेका १० मध्ये ९ खेलमा जित निकालेकोले स्वभाविक रुपमा ब्राजिल कोस्टारीकामाथि हाबी हुने विश्वास लिएको छ।
१९६० यता ब्राजिल कोस्टारीकासँग पराजित भएको छैन् त्यसेलेपनि ब्राजिल सोहि इतिहासलाई कायम गर्ने ध्याउनमा हुने छ। त्यसोत पछिल्लोपटक २०१५ यता यी दुई देश एक अर्काविरुद्ध नभिडेकाले दुवैका लागि विश्वकपको यो खेल अघिल्ला इतिहासको निरन्तरता नहुने खतरा पनि उतिकै रहेको छ।
शुक्र, असार ८, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
बास्कोटा भन्छन लोकप्रिय हुँदा मुल्य चुकाउँनुपपर्दो रहेछ।